‘सुकेटार विमानस्थल लोकोक्ति बनिसकेको छ, नाम बदल्न हुन्न’
ताप्लेजुङस्थित सुकेटार विमानस्थललाई नयाँ नामाकरण गर्ने सरकारी प्रस्तावको व्यापक विरोध भएको छ । पूर्वको नेपाली समाजमा लोकोक्ति सम्म बनिसकेको विमानस्थलको नाम बदल्न नहुने उनीहरुको माग छ । ताप्लेजुङको इतिहासमा यसको किम्बदन्ती रोचक छ । सुकेटार विमानस्थलले स्थानीय सांस्कृतिक लोकभाका समेत प्रचलनमा भएकाले मौलिकतालाई बचाउन नाम बदल्न नहुने उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
बजेट भाषण: कर्मचारी, बृद्धबृद्धा र प्रहरी खुशी
सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँ बढाएको छ । महंगी भत्ता भने यथावत राखेको छ ।"
महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित आगामी वर्षको बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ संघले खर्च गर्न ६ खर्ब ६ अर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात ४१.२ प्रतिशत , पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब अर्ब ४७ अर्थात २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात १२।६ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
बजेट सार्वजनिकको पूर्वसन्ध्यामा ओलीको नीति(सम्बोधनको पूर्णपाठ)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार अपरान्ह राष्ट्रको नाममा संबोधन गरेका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९मा सरकारले गर्ने कामहरूको लागि आधारभूत नीतिहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।"
लकडाउनका बेला उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि
कोरोना महामारीको कारण जारी निषेधाज्ञाका बेला उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा २० देखी ३० प्रतिशत तरकारीमा मनोमानी मुल्य वृद्धि भएको पाइएको छ । थोक व्यापारीहरुले भने कतिपय वस्तुको मुल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आपूर्तिमा कमीका कारण भएको दाबी गरेका छन् ।
आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्रीले ‘हात उठाए’
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुनःप्रा.डा.पुष्पराज कंडेल
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुनःप्रा.डा. पुष्पराज कंडेल नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपाध्यक्ष कंडेलसहित सदस्यहरु डा. कृष्णप्रसाद ओली, डा. उषा झा र मीनबहादुर शाहीलाई आयोगको गठन आदेश बमोजिम नियुक्त गरेको थियो ।
सन् इन्टरनेशनल इनकर्पोरेटेड प्रालिका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिको अगुवाइमा नेपालका ११ वटा शहरमा ‘बास्किन रोबिन्स’को १६ भन्दा बढी रिटेल आउटलेटको बजार व्यवस्थापन गरेको छ ।